सस्तो SNCB ट्रेन टिकटहरू र यात्रा मूल्यहरू | एक ट्रेन सेव
SNCB प्रस्तावहरु बेल्जियम भित्र रेल सेवाहरु र यूरोप भर. सहि टिकटको साथ, you can visit all the best युरोपमा छुट्टी ठाउँहरू. टिकट र कार्ड सदस्यता को विभिन्न वर्ग संग, SNCB सबैको आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ.
ट्रेनहरू लगातार ब्रसेल्समा – घेंट, आन्ट्वर्प – प्रयोग, ब्रसेल्स – नामुर. तपाईं युरोप भित्र छिमेकी देशहरूमा जान सक्नुहुनेछ SNCB रेलहरू प्रयोग गरेर.
निगम भर, नजिक 20,000 रेलवे र बस सञ्जालमा काम गरिरहेका कर्मचारीहरूले सुनिश्चित गर्छन् कि यात्रुहरू सुरक्षित रूपमा हरेक दिन उनीहरूको गन्तव्यमा पुग्छन्.
को मूल्य SNCB train tickets यात्राको दिन नजिकिँदै जाँदा बढ्छ. तपाईं आफ्नो SNCB ट्रेन टिकट प्रस्थान दिन देखि सकेसम्म टाढा बुकिंग गरेर केही पैसा बचत गर्न सक्नुहुनेछ. SNCB ट्रेन टिकटहरू सकेसम्म चाँडो उपलब्ध छन्3गर्न6महिना अगाडि रेल प्रस्थान. प्रारम्भिक बुकिंगले सुनिश्चित गर्दछ कि तपाइँ सबैभन्दा लागत प्रभावी SNCB ट्रेन टिकट पाउनुहुन्छ. तिनीहरू पनि संख्या मा सीमित छन्, छिटो तपाईं अर्डर, तपाईको लागि सस्तो. SNCB ट्रेन टिकटमा पैसा बचत गर्न, ASAP तपाईंको टिकट खरीद गर्नुहोस्.
SNCB ट्रेनहरू उच्च माग मा छन्, र थोरै प्रतिस्पर्धा संग, तिनीहरू हाल बेल्जियम मा ट्रेन को लागी शीर्ष विकल्प रहन. SNCB रेल टिकट प्रतिबन्धहरू सेट गर्न सक्दछ जुन उनीहरूसँग छ कि टिकट विनिमय वा फिर्तीलाई निषेध गर्दछ जबसम्म यो व्यवसायको प्रकारको टिकट छैन।. जहाँसम्म अझै फोरम वेबसाइटहरू छन् जहाँ तपाईं आफ्नो टिकटहरू दोस्रो हात बेच्न सक्नुहुन्छ, SNCB दोस्रो हात टिकट बिक्री को लागी अनुमति दिदैन. यसले कसरी तपाईंको पैसा बचत गर्दछ? तपाईको टिकट मात्र अर्डर गर्नुहोस् जब तपाई आफ्नो तालिकाको निश्चित हुनुहुन्छ तपाईले दुई पटक एक टिकट बुकिंग गर्नबाट बचाउँनुहुनेछ किनकि केहि आयो र तपाईले मूल टिकट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न।.
एउटा ट्रेन सेभ गर्नुहोस् सबैभन्दा ठूलो छ, सबै भन्दा राम्रो, र युरोपमा ट्रेन टिकटको लागि सस्तो सौदा. धेरै रेल अपरेटरहरु संग हाम्रो सम्बन्ध, ट्रेन टिकट स्रोतहरू, र हाम्रो टेक्नोलोजी एल्गोरिथ्मको ज्ञानले सस्तो ट्रेन टिकट सौदाहरूमा रेललाई ट्रेन पहुँच प्रदान गर्दछ. हामी केवल SNCB को लागी सस्तो ट्रेन टिकट डील प्रस्ताव गर्दैनौं; हामी SNCB का अन्य विकल्पहरूको लागि समान प्रदान गर्दछौं र हामी आफूलाई रेल बजारमा उत्तम ग्राहक सेवाका साथ गर्व गर्दछौं.
SNCB टिकट एक एकल रेल यात्राको लागि € २,5 बाट माथि € २० सम्म सुरू हुन्छ. को एक SNCB ट्रेन टिकट को मूल्य कुन प्रकारको टिकट किन्नुहुन्छ र कहिले तपाईले यात्रा गर्न छनौट गर्नुहुन्छ त्यसमा निर्भर हुन्छ:
1) तपाईं शहर केन्द्रमा आइपुग्नुहुन्छ. यो SNCB ट्रेनहरूको एक फाइदा हो जब हवाईजहाजको तुलनामा. SNCB ट्रेनहरू र सबै अन्य ट्रेन यात्रा जहाँसुकैबाट शहर बीचमा अर्को शहर को. यो तपाइँको समय र एयरपोर्टबाट शहरको केन्द्रको लागि ट्याबको लागत बचत गर्दछ. ट्रेन बिसौनी संग, यो सहरको कुनै पनि ठाउँमा पुग्न सजिलो छ जुन तपाईं जानु भएको थियो. तपाईं कहाँबाट यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भन्नेले खास फरक पार्दैन, ब्रसेल्स, आन्ट्वर्प, प्रयोग, वा लीज, शहर केन्द्र रोक्नु SNCB ट्रेनहरूको एक प्रमुख फाइदा हो!
3) सतह मा, SNCB ट्रेन टिकटको मूल्य बजेट एयर टिकट भन्दा बढी महँगो देखिन्छ. तथापि, जब तपाईं समावेश सबै शुल्क तुलना गर्नुहुन्छ, SNCB ट्रेन टिकट एक राम्रो मूल्य सम्झौता छ. सामान शुल्क जस्तै अन्य लागतहरूको साथ जुन तपाईंले रेलहरूमा भुक्तान गर्नु पर्दैन, SNCB द्वारा यात्रा गर्दै निश्चितको लागि उत्तम हो.
4) ट्रेनहरू अधिक पर्यावरण-अनुकूल छन् जब तपाईं रेल र हवाइजहाज बीच तुलना गर्नुहुन्छ, रेलहरू माथि आउँथे. हवाइजहाजले ठूलो मात्रामा वातावरणलाई प्रदूषित गर्छन् उनीहरूको उच्च स्तरको कार्बनबाट. तुलनामा ट्रेनहरूले धेरै दिन्छन् कम कार्बन प्रदूषण हवाइजहाज भन्दा.
बेल्जियमका नागरिकहरूका लागि, सदस्यताका विभिन्न प्रकारहरू छन्, असीमित सीजन टिकट, र मानक सीजन. अन्तर्राष्ट्रियहरूका लागि हामी लामो समय अग्रिममा किन्न सुझाव दिन्छौं र त्यसपछि तपाईंसँग सस्तो विकल्प हुनेछ.
मानक टिकट सबैभन्दा लचिलो ट्रेन टिकट हो जुन SNCB ले प्रस्ताव गर्दछ. यसरी, तपाईं बेल्जियमको कुनै पनि ठाउँमा मानक रेल टिकटको साथ यात्रा गर्न सक्नुहुनेछ. तपाईंले नोट गर्नु पर्दछ कि मानक टिकटहरू अनलाइन किन्नुभयो, प्रतिपूर्ति गर्न सकिदैन. तथापि, यदि योजनाहरूमा परिवर्तन भएको छ भने, तपाईं टिकट काउन्टरमा टिकट फिर्ती वा विनिमय गर्न सक्नुहुनेछ. साथै, यो सेवा उपलब्ध छ, तपाईंको प्रस्थान मिति भन्दा एक दिन अघि, वा को लागी 30 मिनेट पछि तपाईंले टिकट किन्नुभयो.
तपाईं हाम्रो होमपेजमा वास्तविक-समयमा फेला पार्न सक्नुहुन्छ एक ट्रेन सेव SNCB ट्रेन समय सारिणी, केवल तपाईंको हालको स्थान र इच्छित गन्तव्य टाइप गर्नुहोस्, र हामी तपाईंलाई जानकारी देखाउने छौं.
SNCB ट्रेनहरू गेन्टमा बाट छुट्छ गेन्ट सेन्ट पिटरहरू स्टेशन, which is the third-largest city in Belgium and the largest in Flanders.
लीज, लीज Guillemins SNCB केन्द्रीय रेलवे स्टेशन हो. त्यसैले, लीज रेल स्टेशन बेल्जियमलाई छिमेकी देशहरूमा जोड्दछ, making it one of the busiest train stations in Wallonia. यसबाहेक, यदि तपाईं जर्मनी यात्रा गर्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ, फ्रान्स, लक्समबर्ग, वा बेल्जियमबाट नेदरल्याण्ड्स, तपाईं पहिले नै आफ्नो SNCB ट्रेन टिकट आरक्षित गर्न चाहानुहुन्छ.
प्रयोग (Bruge – अर्को लोकप्रिय भाषामा उही शहरको नाम) रेलवे स्टेशन फ्लान्डरमा अर्को व्यस्त SNCB रेल स्टेशन हो. उदाहरणका लागि, Bruges बाट, तपाईं आफ्नो ट्रेन टिकट अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ लोकप्रिय गन्तव्यहरू बेल्जियममा: घेंट, आन्ट्वर्प, and Brussels in less than an hour. The Bruges train station is ata20 मिनेट’ बाट पैदल दूरी शहर केन्द्र, र सुन्दर ओल्ड सिटी मार्केट स्क्वायर.
Leuven मा SNCB रेल स्टेशन बेल्जियमको फ्लेमिश ब्राभान्ट क्षेत्रको मुख्य रेल स्टेशन हो. यो व्यस्त रेल स्टेशन फ्लेमिस क्षेत्रलाई अन्य क्षेत्रहरूसँग जोड्छ र शीर्ष मध्ये एक हो5बेल्जियममा व्यस्ततम रेल स्टेशनहरू. यसरी, तिमी सक्छौ रेल यात्रा ब्रसेल्स गर्न, ब्रसेल्स एयरपोर्ट, Leuven, आन्ट्वर्प, र मूलतया बेल्जियमको कुनै पनि शहर.
बाइकहरूलाई SNCB ट्रेनहरूमा अनुमति छ. यदि तपाईंसँग एक फोल्डेबल बाइक छ, त्यसोभए तपाईं त्यसलाई रेलमा चढ्न सक्नुहुन्छ, कुनै शुल्क बिना. तथापि, बाइकका अन्य प्रकारहरूको तपाईंको ट्रेन टिकटको लागि € lement पूरक खर्च हुनेछ.
हो, तपाईं रेल मा आफ्नो घरपालुवा जनावर ल्याउन सक्नुहुन्छ, प्रति यात्रा €3को लागी. तथापि, घरपालुवा जनावर सिसामा वा झोलामा हुनुपर्छ, वा टोकरी.
तपाईं सक्छ रिजर्भ एक मलाई थाहा छमा अग्रिम on domestic SNCB रेल. तपाईं हुनेछ getapersonal सीट आरक्षण गरे पछि, तर यो आवश्यक छैन.
यदि तपाईंले यो पोइन्ट पढ्नु भएको छ भने, अब तपाईंलाई थाहा छ तपाईंलाई आफ्नो SNCB ट्रेनहरूको बारेमा जान्न आवश्यक पर्दछ र तपाईंको SNCB ट्रेन टिकट खरीद गर्न तयार हुनुहुन्छ एक ट्रेन सेव.